War deg deg ah-:Madaafiic lagu garaacay Madaxtooyada Soomaaliya. | RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
War deg deg ah-:Madaafiic lagu garaacay Madaxtooyada Soomaaliya.
January 11, 2018	2,324 Views
Muqdisho-KNN-Waxaa goor-dhaw madaafiic ay ku soo dhacday meel u dhaw madaxtooyada Soomaaliya waxaana ka dhashay khasaaro dhaawacyo ubadan.
Previous: Madaxweyne farmaajo oo wali ku safraya masaafo dheer oo ka tirsan gobalka Bari ee Puntland.
Next: Dowladda Soomaaliya oo mushaarka ka joojineysa qaar ka mid ah Shaqaalaheeda.